Ukuhlukaniswa: Isikhathi Sokuya Kumsebenzi | Martech Zone
Lokhu, ngaphandle kokungabaza, indawo yebhizinisi engajwayelekile nekusasa elingabazekayo engilibonile empilweni yami. Lokho kusho, ngibheke umndeni wami, abangane, namakhasimende ehlukaniswa ngamathrekhi amaningana:
Anger - lokhu, ngokungangabazeki, kubi kakhulu. Ngibheke abantu engibathandayo nengibahloniphayo ngentukuthelo nje ngishaya wonke umuntu. Akusizi lutho nanoma ngubani. Lesi yisikhathi sokuba nomusa.
ukukhubazeka - abantu abaningi bane- linda futhi ubone isimo njengamanje. Abanye babo balinde ukutakulwa… futhi nginovalo lokuthi akekho ozobe ekhona ukwenza lokho.
Work - Ngibheke abanye bengena. Njengoba imifudlana yabo yemali engenayo iphukile, babheka ezinye izindlela zokusinda. Le yimodi yami - ngisebenza imini nobusuku ekuphakamiseni eminye imifudlana yemali engenayo, ukunciphisa izindleko, nokukhulisa izinsiza engizishiyile.
Ngokudayiswa namahhovisi kuvaliwe ukwenza isicaba ijika futhi baziqhelelanise nomphakathi ukunciphisa ukusabalala kwe ICorona Virus, abantu akukho okunye abangakwenza ngaphandle kokuhlala ekhaya. Yize lokhu kungangcwaba amabhizinisi amaningi, angikwazi ukuzibuza ukuthi kungani izinkampani zingekho maqembu nokusebenzisa lesi sikhathi ukucabanga, ukusungula, nokusebenzisa.
Elinye lamakhasimende ami abalulekile kwadingeka lingivumele ngiyokonga imali yabo ethembele kuphela ezikoleni. Umphathi omkhulu wangibiza uqobo lwami ezongichazela ngesimo. Kwakumele avikele inkampani yakhe. Angingabazi ukuthi kwakuyisinqumo esifanele futhi ngamazisa ukuthi, ngaphandle kwenkokhiso, ngangizotholakala kunoma yiluphi ushintsho noma ukuqaliswa okuzobasiza.
Leli klayenti elithile lisanda kwethula umkhiqizo oqonde ngqo kubathengi. Besilokhu sihamba kancane futhi sizimisele ukungawukhuthazi umkhiqizo ukuze uvivinye futhi uthuthukise ukusetshenziswa futhi siqinisekise ukuthi uhlanganiswe kahle ekuqhubekeni komsebenzi wabo wokukhiqiza. Ngihlanganyele nethimba lakhe ukuthi lesi bekuyisikhathi esifanelekile sokunyathela igesi. Nakhu ukuthi kungani:
Ukuphazanyiswa Okuncane - ngabasebenzi bamathambo nama-oda amancane azongena, wethula isoftware yokuthengisa ezenzakalelayo ukukhuthaza umkhiqizo ngeke uphazamise kakhulu ngaphakathi kubasebenzi babo. Bangakwazi ukuphatha kangcono ukuthutheleka kwezinkinga lapho bethula umkhiqizo omusha nezinhlelo ezintsha zokuwusekela.
Isikhathi Semfundo - nabasebenzi abasebenza ekhaya, abangakwazi ukuya emihlanganweni, futhi bengaphazanyiswa yizinkinga zasehhovisi, abasebenzi banesikhathi esimangalisayo sokuya ekuqeqeshweni nasekusebenziseni izixazululo abazidingayo. Ngibeke amademo okuzosiza abasebenzi bangaphakathi futhi ngagqugquzela abathengisi bami ukuthi babasize ukuhlela isikhathi sokuya khona.
Inqubo Yokuzenzekelayo - Angikholwa ukuthi sizophindela emuva ibhizinisi njengenjwayelo ngemuva kwalo mcimbi. Sibhekene nokwehla kwamandla omnotho komhlaba wonke, ukubheka okudingekile ekuhlukaniseni amaketanga ethu okuhlinzeka, kanye nokudilizwa kwamathuba okuvikela izinkampani ekungeneni ngaphansi. Lesi yisikhathi esihle sokuthi izinkampani zitshale imali enkulu futhi zenze ngcono ukuhamba kwazo ukuze zikwazi ukuqhubeka nokukhiqiza ngenkathi zinciphisa izindleko.
Izinkampani: Isikhathi Sokuya Emsebenzini
Ngingakhuthaza zonke izinkampani ezikhona ukuthi zisebenze. Abasebenzi bakho basebenzela ekhaya, banokuxhumana, futhi bangaba matasa ukusebenzisa nokuqeqesha kuzingxenyekazi ezintsha. Amathimba wokuhlanganisa nokwenza kahle asebenza kude kulezi zinsuku, ngakho-ke osonkontileka bazilungiselele ngendlela engakaze ikwazi ukukusiza. Inkampani yami, Highbridge, iza neminye imibono yokuhlanganisa ukuhlangabezana nezixazululo zobuhlakani ukusiza izinkampani ezinezindawo ezikude zomsebenzi.
Abasebenzi: Isikhathi Sokuphishekela Ikusasa Lakho
Uma ungumuntu okhokha imali yakhe isengcupheni, lesi yisikhathi sokuthi weqe. Uma mina, ngokwesibonelo, bengiyibartender noma iseva… ngabe ngigxuma ku-inthanethi futhi ngifunda imisebenzi emisha. Ungalindela ukutakulwa, kodwa lokho kuyisiduduza… akusona isisombululo sesikhathi eside enkingeni obhekene nayo. Embonini yezobuchwepheshe, lokhu kungabhalisela mahhala Inkambo ye-Trailhead ku-Salesforce, uthatha amakilasi wamahhala ekhodi online, noma ukufunda ukuthi ungasivula kanjani isitolo sakho ku-Etsy.
Lesi akusona isikhathi se-Playstation ne-Netflix. Lesi akusona isikhathi sokuthukuthela noma sokukhubazeka. Akekho ongavimba ulaka lukaMama Wemvelo. Lesi noma esinye isigameko senhlekelele besingenakugwemeka. Lesi yisikhathi sokusebenzisa impilo yethu yansuku zonke iphazanyiswa ukuze siye phambili. Abantu nezinkampani ezisizakala njengamanje zizovuka ngokushesha kakhulu kunangaphambili.
Tags: ezishintshayoi-coronavirusi-covid-19ukuphazamisekaImfundoubhubhaneimpendulo yobhubhane